​वायुसेवा निगमले डेढ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले डेढ सय नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ। सबै कर्मचारी प्रशासनिक समूहतर्फ पदपूर्ति गर्ने निगमले जनाएको छ। निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माका अनुसार १..
​अब निजामति कर्मचारीका लागि पनि कल्याणकारी कोष
काठमाडौ । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि पनि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कल्याणकारी कोषसम्बन्धी नियमावली पारित गरेपछि यस्तो कोष बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो कोषमा..
​नासु र खरिदारका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा पास गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारको नायब सुब्बा र खरिदार पद (अप्राविधिक)का लागि प्रारम्भिक परीक्षा पनि पास गर्नु पर्ने भएको छ। राजपत्रअनकिंत प्रथम श्रेणीको नासु र द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदका लागि यसअघि..
पुनर्बीमा कम्पनीको सिइ‌ओमा चिरायुृ भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चिरायु भण्डारी नियुक्त भएका छन् । उनी चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका हुन् । गत जेठमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारीका लागि विज्ञापन गरेको..
९० हजार भिसा स्वीकृति लिएर म्यानपावर बन्द, भिसा लागेकाहरु विदेश जानबाट रोकिए
काठमाडौं । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा नेपाली कामदार विदेश पठाउने निर्णय लागू हुनुअघि नै म्यानपावर कम्पनीहरुले ९० हजार भिसाका लागि पूर्व स्वीकृती लिइसकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रममन्त्री..
​​३ महिनाभित्र पारिश्रमिक बढ्ने
​काठमाडौं । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक ३ महिनाभित्र बढ्ने भएको छ । बिहीबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा श्रम महाशाखा प्रमुख आभा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्यूनतम पारिश्रमिक..
कर्मचारी संचय कोषमा बरिष्ठ प्रबन्धक, शाखा अधिकृत, प्रमुख सहायक र बरिष्ठ कम्प्युटर सहायक गरी ५५ पदको लागि जागिर खुल्यो
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले प्रशासन तर्फ बरिष्ठ प्रबन्धक ९ औं तहमा १, शाखा अधिकृत छैटौं तहमा ८, प्रमुख सहायक पाँचौं तहमा ४३ जना र प्राविधिक तर्फ पाँचौ तहममा बरिष्ठ..
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी माग्यो, प्रशासन तर्फ तृतीयमा २५ र द्धितीयमा ६ जना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशासनतर्फ अधिकृत तृतीय तहमा २५ जना र द्वितीय तहमा ६ जनाको आवेदन खुलाएको छ । यी दुवै पदमा आवेदन दिन चाहनेले साउन १० गते भित्रमा..
श्रम प्रतिनिधिहरुबीचको विवादले ​वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय बन्द
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयमा श्रम प्रतिनिधिहरुबीचको विवादले बुधवारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । कर्मचारीहरुको असुरक्षाको कारण जनाउँदै विभागको काठमाडौ कार्यालय बुधबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो । मंगलबार..
​वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा खर्च निःशुल्क
काठमाडौ । सरकारले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने शर्तमा..
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १९५ कर्मचारीको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले एक सय १९५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । तह तीनदेखि आठसम्मका लागि बैंकले कर्मचारी माग गरेको हो । राजधानीलगायत राजधानी बाहिरका लागि बैंकले कर्मचारी..
​क्यानका महानिर्देशक गौतमद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का नवनियूक्त महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले सोमबारदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई महानिर्देशकमा नियूक्त गरेको थियो । महानिर्देशक गौतमले आफ्नो कार्यकालमा..
​भूकम्पप्रभावित जिल्लाका युवालाई क्यानडाले रोजगारी दिने
काठमाडौं । क्यानडाले भूकम्प प्रभावित नेपाली युवालाई रोजगारी दिने इच्छा देखाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका क्यानडाका उच्च अधिकारीले भूकम्पप्रभावित युवालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिनसक्ने बताएका हुन्। भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा नेपाल..
भूकम्पपछिको दोस्रो सेयर कारोबार, नेप्से २९ अंकले घट्यो
काठमाडौं । भूकम्पपछि कारोबार खुलेको दोस्रो दिन सोमबार २९ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक ८ सय ८० अंकमा झरेको छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण एक महिना अवरुद्ध भएर बजार खुलेको पहिलो..
महानगरका कार्यकारी प्रमुख तण्डुकार हटाइए
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारलाई पदबाट हटाएको छ। ‘महाभूकम्पपछि आइलागेको महाविपत्तीमा तण्डुकारले पदीय जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी रुपले काम गर्न नगरेको भन्दै सरकारले उनललाई महानगरपालिकाबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा..
लोकसेवा आयोगले भूकम्पका कारण स्थगित भएका परीक्षा आउँदो २९ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले भूकम्पका कारण स्थगित भएका परीक्षा आउँदो २९ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा, खरिदार तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फको विभिन्न..
​कुमार लम्साल जनता बैंकको सिईओमा नियुक्त, आइतवारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंकमा झण्डै आठ महिना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि विदा भएका कुमार लम्साल जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका छन् । रमेशकुमार भट्टराईले पदवाधि पूरा नहुँदै राजिनामा..
​कृषि अनुसन्धान परिषदले माग्यो २०७ जना कर्मचारी, योग्यता वढीमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २०७ जना कर्मचारी माग गरेको छ । परिषद्ले प्रशासन, लेखा र प्राविधिकमा कर्मचारी माग गरेको हो । अधिकतम शैक्षिक योक्ष्यता प्रविणता प्रमाणपत्र उत्तिण मागिएको छ..
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महानिर्देशकमा धरणीधर खतिवडा नियूक्त
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महानिर्देशकमा धरणीधर खतिवडा नियूक्त भएका छन् । उनले बुधबार महानिर्देशकको पदवहाली गरेका छन् । यसअघि खतिवडा महासंघको वरिष्ठ परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत..
​श्रमिकलाई बढि भयो राहदानी शुल्क, घटाउन समितिको सुझाव
काठमाडौ । विदेश जान बाध्य भएका श्रमिकलाई थप मार सिर्जना गर्ने हिसाबबाट हाल हँुदै आएको राहदानी वितरण प्रक्रिया र लिइँदैआएको शुल्कमा पुनःविचार गर्न सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम..
​रोजगारमूलक र व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ –मन्त्री बस्नेत
काठमाडौ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक र रोजगारमूल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सान्वना मेमोरियल बहुमुखी क्याम्पसको ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जागिरका लागि नेताको घरमा धाउने..
​लुम्बीनी इन्स्योरेन्सका सीइओ बरालद्वारा राजिनामा, युनाइटेड इन्स्योरेन्स जाँदै
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बिहीबार पदबाट राजिनामा गरेका छन् । सञ्चालक समितिसँग मतभेद भएपछि चार वर्षे कार्यकाल भए पनि ३३ महिनामै बरालले राजिनामा दिएका..
जीएमहरुको जागिर धरापमा, सर्वोच्चद्धारा सार्वजनिक संस्थान बोर्डलाई बैधानिकता
काठमाडौं । सर्वाच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्डलाई बैधानिकता दिएसँगै वोर्डसँग समन्वय नगरि गत वर्ष राजनीतिक नियुत्त गरिएका एक दर्जन वढि सरकारी संस्थानको जिएम (महाप्रवन्धक)को जागिर धरापमा पर्ने भएको छ..
शिक्षक सेवा आयोगले ३ हजार २ सय ४९ पदका लागि विज्ञापन खोल्यो
भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले ३ हजार २ सय ४९ पदका लागि विज्ञापन खोलेको छ । एक महिना फर्म भर्ने म्याद कायम गरि विज्ञापन खोलिएको छ । असारको ११..
​कृषिमा झन्डै २३ प्रतिशत जनशक्ति रिक्त
बनेपा । पशुसेवा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल र कृषि सेवा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलको संयुक्त आयोजनामा दुईदिने दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी आजदेखि बनेपाको बुडोलमा सुरु भएको छ । मध्यमाञ्चलका १९ वटा जिल्लाको सहभागिता रहेको..
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका सीइओ श्रेष्ठको राजिनामा
काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीले गत चैत १२ गते नै श्रेष्ठको राजिनामा स्वीकृत गरिएको आइतबार नेप्सेलाई जानकारी दिएको..
​हिमपातका कारण यार्सागुम्बामा ढिलाइ हुने
भीमदत्तनगर . यस वर्ष दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रहरुमा उच्च हिमपात भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा धेरै हिमपात भएकाले ती क्षेत्रहरुमा यार्सागुम्बा ढिलो हुने भएको स्थानीयले बताएका छन्..
​युवा स्वरोजगारका लागि ५० करोडको कोष खडा गर्ने तयारी
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ५० करोडको ‘नवीन विचार कोष’ खडा गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । काठमाडौंको काँडाघारीस्थित भीमेश्वर एकेडेमीको नवौँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसका अवसरमा..
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो, फारम भर्ने समय बैशाख ३ देखि ६ सम्म
काठमाडौं । आगामी जेठमा सञ्चालन हुने कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम खुलेको छ । फारम आगामी वैशाख तीन गतेदेखि ६ गतेसम्म भर्नुपर्ने इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । फारम भर्नका लागि..
​आमिरले लिए एउटै विज्ञापनबाट ३० करोड भारु
एजेन्सी मुम्बई । बलिउड अभिनेता आमिर खानले विज्ञापन पारिश्रमिकमा सबै सेलेब्रेटीलाई पछाडी पारिदिएका छन्। उनले विज्ञापन खेलेबापत् १ दिनको पाँच करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छन्। हालै एक इ-कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा कम्पनीको..
Results 878: You are at page 28 of 30